GEELJIRE: “Hadaanu nahay Somaliland iyo Somalia waxaan cambaareyneynaa Geela lagu laayay dalka Australia” – Maanta Online
Dowladda Australia ah oo ku caan baxday dhibaatooyinka loo geysanayo Geela dalkaasi ku nool, waxayna shalay amar ku bixisay in la laayo 10-Kun Geel kaddib markii dowladdu u adkeysan weysay biyaha faraha badan ee uu cabayo.
Xasuuqa Dowladda Australia ku heyso Geela, waxaa si weyn uga xumaaday ururrada u dooda xuquuqda xayawaanka ee dalkaasi ka jira, iyagoona sheegay in go’aankaasi xadgudub ku yahay Geela oo ka mid ah xoolaha dalkaasi ku nool.
Dhaqashada xoolaha Geela oo ka jira dalalka caalamka qaarkood sida Afrika, Carabta iyo dalal kale, kuwaasi oo iyagu siyaabo kala duwan uga faa’iideysta manaafacaadka uu Alle SWT ku manneystay.
Cabdullaahi Geeljire oo ka mid ah dadka aqoonta u leh dhaqashada Geela oo BBC-da u waramayay ayaa ka codsaday dowladda Australia inay u soo dhoofiso Geela, wuxuuna cambaareeyay xasuuqa loo geystay.
“Hadaanu nahay Geeleyda Somaliland iyo Somalia baan uga xunahay Geela lagu laayay Australia” ayuu yiri Cabdullaahi Geeljire oo sheegay in dhaqashada Geela uu ka mid yahay xoolaha ay Soomaalida isku karaameyso.
← Xisbi siyaasadeed war culus ka soo saaray khatarta ku dahaaran doorashooyinka dalka (Warsaxaafadeed)
Iiraan oo qiratay inay soo riday diyaaradii hawadeeda ku burburtay →
Oow koombe iyo Isbaaro
Madaxweynayaashii hore oo maanta tegaya Beled Weyne